यी ब्यक्ति जस्ले जन्मदिनमा दिए आविष्कार केन्द्रलाई ५० हजार सहयोग! – PathivaraOnline
Home > समाचार > यी ब्यक्ति जस्ले जन्मदिनमा दिए आविष्कार केन्द्रलाई ५० हजार सहयोग!
admin November 14, 2020 समाचार	0
बागलुङ- गलकोट नगरपालिका–७ मल्म घर भई हाल जापानमा रहेका तुलवीर थापा ‘समर्पण’ले जन्मदिनको अवसरमा महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
उनले केन्द्रलाई ५० हजार आठ सय ९० रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन् । शुक्रबार आविष्कार केन्द्रमै पुगी पत्रकार बबिता शर्मा र बैङ्कर्स शिव आचार्यले उक्त रकम केन्द्रका संयोजक पुनलाई हस्तान्तरण गरे ।
संयोजक पुनले प्रवासदेखि थापाले गरेको सहयोग र देखाएको सद्भावप्रति आविष्कार केन्द्र आभारी रहेको बताए ।
थापाले तत्काललाई रु. ५० हजार सहयोग गरेपनि आउँदो एक वर्षसम्म हरेक महिना आफ्नो कमाइको रु. पाँच हजार केन्द्रका लागि छुट्टाउने प्रतिबद्धता जनाए । त्योसमेत गरी थापाको सहयोग रकम रु. एक लाख दश हजार पुग्ने छ ।
‘जन्मदिनमा केही नयाँ काम गरौँ भन्ने थियो, आविष्कार केन्द्रकाबारेमा सुनेपछि त्यसमै सहयोग गर्ने सोच पलायो’, उनले भने । नौ वर्षअघि जापान पुग्नुभएका थापाको नागोयामा रेष्टुराँ व्यवसाय छ । व्यवसायसँगै सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा पनि उनी सक्रिय छन् ।
आज लक्ष्मी पूजा, यसरी गर्नुहाेस् धनधान्यकि देवी लक्ष्मीको विशेष पूजा, घरमा लक्ष्मीबाे बास हुनेछ!
तिहारमा रबि दाईलाई सम्झिदै यसरी भक्कानिइन बुहारी अस्मिता, जीत भित्रकाे हार भयो (भिडियो हेर्नुस्)